Filazam-barotra amin'ny Rikoooo - Rikoooo
Filazam-barotra amin'ny Rikoooo.com
Rikoooo.com satria 2005, dia ny boky toerana ny avionics simulation tany Frantsa, miaraka amin'ny alaina, ny fiaraha-monina sy nivoatra.
Ireo mpitsidika (116 000 / volana ary ny pejy 13 tapitrisa ao amin'ny 2011!) Mpankafy amin'ny simulator sidina, matetika tompon'ny FSX, P3D, FS2004 ary X-Plane, maro amin'izy ireo no "mpilalao mafy". Manome anao fahafahana hahita fahitana amin'ny alàlan'ny fampisehoana dokambarotra izahay. Tongava mampiditra anay mpizara;
Format ny faneva;
Ny dokam-barotra ao amin'ny endriky ny faneva 468 habe amin'ny 60 teboka na 728 amin'ny 90 pixels, Gif, Animated Gif, PNG, JPEG na animation tselatra (Max 100 KB). Ianao manome azy io amin'ny alalan'ny mailaka (na amin'ny alalan'ny rohy raha efa nanatrika ny harato).
Sample endrika ekena amin'izao fotoana izao:
Aorian'ny fahazoan'ny sy ny fandraisana ho mpikambana ny filaminana, ny fanevany dia ho aseho eo amin'ny tranonkala an-trano pejy, alaina sy ny faritra vaovao.
Fanoharana momba ny nametraka;
Home Pejy Sary 468x60 teboka
Banner 728x90 teboka Home Downloads pejy
Category ary matoanteny
Banner 728x90 teboka Downloads pejy
Mampiasa matihanina fandaharana mba hitantana ny fampisehoana ny sora-baventy, ka dia afaka mangataka ny fampisehoana ny fanevany amin'ny indraindray ny andro (oh 16h-19h), na mametra ny fampisehoana ny X imbetsaka isaky ny mpampiasa (mba hametra repetitions) , sy ny maro hafa. Ny tantara dia noforonina miaraka amin'ny fandaharana natokana ho an'ny mpanao dokam-barotra mba hamela anao mba hanara-maso ny fampielezan-kevitra.
Rikoooo.com dia tena hatsaran'ny tranonkala, amin'ny ankapobeny, sora-baventy ireo no voalaza amin'ny CPM (Cost Per Mille) ao amin'ny 3.50 € harato isaky ny arivo heviny momba ny toerana tiany. Ianao handoavana ny boky mampiseho ny dokambarotra. Ny tombony izany dia miankina indrindra amin'ny modely ny zava-misy fa raha mifanaraka tsara Rikoooo.com ny lasibatra sy ny hafatra dia ny ROI (miverena amin'ny Fampiasam-bola) dia ho rehareha.
* Mariho tsara fa lehibe kokoa no CPM mba lehibe kokoa ny isan-jato no fampihenana.
d'avoir de visibilité le biais d'Affichage d'une encart publicitaire.